အပူခြိနျမွငျ့မားလာခြိနျတှမှော သတိပွုရမညျ့ အခကျြမြား – Shwe Nay Chi
အပူခြိနျမွငျ့မားလာခြိနျတှမှော သတိပွုရမညျ့ အခကျြမြား
လူမြားစှာတို့အတှကျနှရောသီကာလဆိုတာကြောငျးပိတျရကျ၊ ရုံးပိတျရကျ၊ ခရီးသှားရကျ၊ အပနျးဖွရေကျ ဖွဈပါတယျ။
တနညျးပွောရပါက လအေေးပေးစကျမြားတပျဆငျထားတဲ့ ရုံးခနျး၊ အိမျဧညျ့ခနျးတှထေဲက ပငျနပေူထဲအထှကျမြားတဲ့ကာလဖွဈပါတယျ။
အဲဒါကွောငျ့ နရေောငျခွညျနဲ့ တိုကျရိုကျထီတှမှေု့မြားတဲ့ကာလ၊ အအေးဓါတျသငျ့တငျ့အောငျမရှိတဲ့ ပတျဝနျးကငြ မှာအနမြေားတဲ့ကာလဖွဈပါတယျ။
အဲဒီမှာ ပူပွငျးလှနျးတဲ့ နရေောငျခွညျနဲ့ ထိတှရေ့တဲ့ အခါ လူအတျောမြားမြားမှာ နရေောငျခွညျနဲ့ ဆကျစပျတဲ့ဖြားနာမှုတှကေို ခံစားကွရပါတော့တယျ။
နပေူထဲတှငျအလုပျလုပျကွရသူမြား၊ သှားလာနထေိုငျကွသူမြားအနနေဲ့ အပူဒဏျခံစားရမှု အနညျး အမြားဟာ သဘာဝရေးရာအခွအေနေ(၄)မြိုးအပျေါမှာမူတညျနပေါတယျ။
အဲဒါတှကေတော့ (၁) အပူခြိနျ၊ (၂)ရငှေေ့၊ (၃)အပူရှိနျ နဲ့ လတေိုကျနှုနျး တို့ဖွဈကွပါတယျ။ အထူးသဖွငျ့ နှလုံးရောဂါရှိ သူမြား၊ water pills ဆောငျထားရသူမြားအနနေဲ့ အပူဒဏျခံစားရမှုဟာ ပိုမိုဆိုးဝါးတတျပါတယျ။
အမှနျတော့ လူ့ရဲ့ခန်ဓာကိုယျဟာ ပွငျပအပူဒဏျကိုခုခံကာကှယျဖို့ (၃)မြိုးသုံးစား ဆောငျရှကျပေးလေ့ ရှိပါတယျ။ ဒါတှကေတော့ အသကျရှူခွငျး၊ ခြှေးထှကျခွငျး နဲ့ သှေးလညျပတျမှုကိုပွောငျးလဲပေးခွငျး တို့ဖွဈကွပါတယျ။ ဥပမာအားဖွငျ့ ပွငျပအပူရှိနျမွငျ့ တကျလာပါက ခန်ဓာကိုယျရဲ့သှေးလညျပတျမှုတှေ ဟာ မွနျဆနျလာတတျကွပါတယျ။
ယငျးမှတဈဆငျ့ အရပွေားအပူခြိနျတှကေိုတိုးမွှငျ့လာစပွေီး ခန်ဓာကိုယျတှငျးမှ ပိုလာတဲ့ အပူတှကေို ပွငျပသို့စှနျ့ထုတျပေးစပေါတယျ။ အလုပျမြားပငျပငျပနျးပနျး လုပျကွရတဲ့အခါ ခန်ဓာကိုယျရှိကွှကျသားမြားဟာ သှေးစီးဆငျးမှုပိုမိုလိုအပျလာပါတယျ။အဲဒီအခြိနျမှာ ခန်ဓာမှ လှတျပေးနတေဲ့ အရပွေားရဲ့သှေးစီးဆငျးမှုအတှကျလိုအပျတဲ့သှေးပမာဏကိုလြော့ကစြပွေီး ခန်ဓာကိုယျမှအပူမြားအပွငျကိုစှနျ့ထုတျစပေါတယျ။
ခြှေးထှကျခွငျးဟာလညျး ခန်ဓာကိုယျရဲ့အပူခြိနျမြားကိုကဆြငျေးစပွေီးအအေးဓါတျကိုရစပေါတယျ။ ဒါဟာလညျး ပွငျပလထေုစိုထိုငျးဆတှဟော လြော့နညျးနပွေီး ထှကျလာတဲ့ခြှေးတှကေို အငှပြေံ့ စနှေိုငျမှသာဖွဈနိုငျပွီး၊ အဲဒီခြှေးတှေ အငှပြေံ့သှားလို့ လြော့နညျးကသြှားတဲ့ ဆားဓါတျနဲ့ ရဓေါတျတှကေိုပွနျလညျအစားထိုးဖွညျကဆညျးပေးနိုငျမှသာဖွဈနိုငျပါတယျ။
(၁) အပူဒဏျဖိစီးခံရမှု(Heat Stress)
လူရဲ့ခန်ဓာကိုယျအပူခြိနျဟာ မွငျ့မားပါက အပူဒဏျဖိစီးခံရမှု(Heat stress)ကို ခံစားကွရပါတယျ။ အပူဒဏျဖိစီးခံရတဲ့သူတဈဦးဟာ အပူနဲ့ပတျသကျတဲ့ဝဒေနာမြိုးစုံးကိုကွုံတှရေ့တတျပါတယျ။ heat exhaustion, heat stroke, heat cramps, fainting, heat rash စတာတှဖွေဈကွပါတယျ။ အမှနျမှာတော့ လူအမြားစုဟာ ဒီအပူနဲ့ပတျသကျတဲ့ဝဒေနာတှကေို ကှဲကှဲပွားပွားမသိကွပဲ ရောထှေးနတေတျကွပါတယျ။ အမှနျမှာတော့ ခှဲခွားသိဖို့လိုအပျပါတယျ။
အပူဆိုငျရာပွဿနာတှထေဲမှာ အဆိုးဝါးဆုံးဝဒေနာတဈခုမဟုတျသျောငွားလညျး အဖွဈအမြားဆုံး သော ဝဒေနာတဈခုဖွဈပါတယျ။ ဒီဝဒေနာကို အလုပျသမားတဈဦးဟာ ခြှေးထှကျလှနျလာခြိနျတှငျ ရအေလုံအလောကျမသောကျရပါက၊ ဒါမှာမဟုတျ ထှကျးသှားတဲ့ခြှေးမြားအတှကျ ဆားဓါတျ အလုံအလောကျပွနျလညျမရရှိပါကဖွဈတတျသောဝဒေနာဖွဈပါတယျ။ မြားသောအားဖွငျ့ သကျဆိုငျရာ လူနာဟာ အားဖြော့လာခွငျး၊ အသားအရဖွေူဖပျဖွူလြျောဖွဈလာခွငျး၊ ခြှေးမြားဖွငျ့ စိုရှဲလာခွငျး စတာတှဖွေဈတတျပါတယျ။
ရောဂါသှငျပွငျလက်ခဏာမြား။ ခြှေးထှကျလှနျခွငျး၊ မောပနျးနှမျးနယျ၍အားနညျးလာခွငျး၊ ကိုယျအပူခြိနျအနညျးငယျ မွငျ့တကျလာခွငျး၊ အသားအရဖွေူဖပျဖွူလြျောဖွဈလာပွီးသှေးဆုတျလာခွငျး။
ရှေးဦးသူနာပွု ဆောငျရှကျသငျ့သောအရာမြား။ (က)အေးသောနရောတှငျတားနပေါ။ (ခ)အားကစားသမားမြားသုံးဆောငျသော အားဖွညျ့ အခြိုရညျ တဈမြိုးမြိုး ကိုသောကျသုံးပါ။ (ဂ)အကယျ၍ အော့အနျခွငျး၊ အစားအရညျသှေးမရှိသကဲ့သို့ ဖွူဖတျဖွူလြျောဖွဈလာပါက ဆရာဝနျဆေးခနျးနဲ့ အမွနျဆုံးပွသပွီးကုသမှုခံယူပါ။
အပူကွောငျ့ဖွဈပျေါသောဝဒေနာမြားတှငျ အဆိုးဝါးအပွငျးထနျဆုံးဝဒေနာဖွဈပွီး၊ နပေူထဲတှငျအ ခြိနျကွာမွငျ့စှာအလုပျလုပျနသေောအလုပျသမားမြားတှငျအမြားဆုံးဖွဈပျေါလရှေိ့သျောလညျး အဖွဈမြားလမေ့ရှိပါ။
လူရဲ့ခန်ဓာကိုယျက ပငျမအပူခြိနျတှငျထိနျးထားနိုငျရနျ သှေးလညျပတျမှုမပွုနိုငျတဲ့ အခါမှာ ဖွဈလရှေိ့တဲ့ဝဒေနာဖွဈပါတယျ။ အဲဒီအခါမြိုးမှာ လူ့ခန်ဓာကိုယျဟာခြှေးမထှကျနျိုငျတော့တဲ့ တှကျ ခန်ဓာကိုယျမှာပိုလြှံနတေဲ့အပူတှကေိုမစှနျ့ထုတျနိုငျတဲ့အတှကျရရှိလာတဲ့ဝဒေနာဖွဈပါတယျ။မှနျကနျတဲ့ကုသမှုကိုအမွနျဆုံးမရရှိနှိုငျပါက အသကျသဆေုံးရလရှေိ့ပါတယျ။
ရောဂါလက်ခဏာမြားစိတျဂယောငျခွောကျခြားဖွဈခွငျး၊ သှေးဆုတျခွငျး၊ delirium, seizures ခန်ဓာကိုယျအပူခြိနျ106ºFထကျကြျောလှနျနခွေငျး၊ ကိုယျပူခွငျး၊ အသားအရခွောကျခမျးခွငျး၊ အသားမြား နီရဲခွငျး၊ အသားမြားပွာနှမျးလာခွငျး၊
အရေးပျေါသူနာပွုကားကိုချေါဆိုပါ။လူနာအားအေးသောနရောတဈခုသို့ပွောငျးရှထေ့ားပါ။ အအေးဆှတျထားသော ရဝတျတိုကျပေးခွငျးအားဖွငျ့လူနားအားစိုစှတျနပေါစေ။ လူနားအား လအေေးစကျ၊ ပနျကာလဖွေငျ့ အပူခြိနျကအြောငျဆောငျရှကျပေးပါ။
ကွှကျသားမြားမခံမရပျနိုငျအောငျနာကငျြမှုကိုခံစားရတဲ့ဝဒေနာဖွဈပါတယျ။ ရောဂှဖွဈရတဲ့ အကွောငျးရငျးမှာ အလုပျသမားမြားဟာ အလှနျမောပနျးလို့ခြှေးထှကျလှနျလာသော အခါရကေို အမြားအပွားသောကျသျောလညျးထှကျသှားတဲ့ခြှေးမြားရဲ့နရောကို ဆားဓါတျမဖွညျ့ဆညျး ပေးတဲ့အတှကျဖွဈရတဲ့ဝဒေနာဖွဈပါတယျ။ အလုပျလုပျရာတှငျအသုံးမြားသော ခန်ဓာကိုယျရဲ့ ကွှကျသားမြားဟာ cramps အမြားဆုံး ခံစားကွရပါတယျ။
ကွှကျသားမြား cramps or spasms ဖွဈခွငျး။ အလုပျလုပျနစေဉျအတှငျး (သို့မဟုတျ) အလုပျလုပျပွီးမှဖွဈပျေါတတျလရှေိ့ပါတယျ။
အားကစားသမားမြားအသုံးပွုသော အားဖွညျ့အခြိုရညျတဈခုခုကိုသောကျသုံးပါ၊ မသကျသာပါက ကနျြးမာရေးဦးစီးဌာန/ဆေးရုံ/သူနာပွုကားတို့ကိုအကွောငျးကွားပါ။
နပေူထဲတှငျအလုပျလုပျလမေ့ရှိသူမြား နပေူအတှငျးအလုပျလုပျမိသောအခါ(သိူ့မဟုတျ) နပေူထဲတှငျ ကွီးကွပျရေးအလုပျလုပျမိသော အခါဖွဈတတျသောဝဒေနာဖွဈပါတယျ။
အမြားအားဖွငျ့ နပေူအတှငျး အခြိနျကွာမွငျ့စှာရပျတနျ့နခွေငျးထကျ တဈနရောမှတဈနရောရှပွေ့ောငျး လြှောကျသှားနခွေငျးက မြားသောအားဖွငျ့ သှေးဆုတျယုတျမှုဖွဈပျေါစမှေုကို လြော့ကစြတေတျပါတယျ။
ခတ်ေတခဏမြှ သတိလဈသှားတတျခွငျး၊ ခန်ဓာကိုယျတှငျသာမာနျအပူခြိနျမြှသာရှိနသေျောလညျးခြှေးထှကျမြားနတေတျခွငျး။ Heat stroke, heat exhaustation ဝဒေနာလက်ခဏာမြားမတှရေ့တတျခွငျး၊
အေးသောနရောတဈခုခုတှငျ လဲလြောငျးနပေါ။ အခြိနျအတနျကွာသညျအထိလဲလြောငျးနသေျောလညျးသကျသာမှုမရှိပါကဆေးကုသမှုခံယူပေးပါ။
rash ကို Pricky heat ဟုလညျးချေါဝျေါကွပါတယျ။ လထေုသညျ ပူအိုကျစှတျစိုနသေောအခါ အလုပျလုပျနသေူတဈဦးဟာ ခြှေးမြားထှကျလာတဲ့အခါ အလှယျတကးအငှေ့ မပြံနိုငျတဲ့အတှကျ ကွောငျ့ဖွဈပျေါရတဲ့ဝဒေနာဖွဈပါတယျ။အဆိုပါ rash ဧရိယာဟာ ကွိးမား ကယျြပွနျ့လာပါက အလှနျအခံရခကျစတေဲ့ဝဒေနာကိုခံစားကွရပါတယျ။
အေးတဲ့နရောတဈခုမှာနပွေီး အရပွေားကို ခွောကျသှအေ့ောငျလုပျပေးခွငျးအားဖွငျ့ Heat rash ဖွဈခွငျးကိုကာကှယျပေးနိုငျကွပါတယျ။
ရောဂါသှငျပွငျလက်ခဏာမြား။ အရပွေားအပျေါတှငျ အနီရောငျ/ပနျးနု ရောငျ အစကျအပွောကျမြားပျေါလာခွငျး၊ အဆိုပါအစကျအပွောကျမြားမှ အခံရခကျလာခွငျး၊ အရပွေားမြားယားယံလာခွငျး၊
အသားအရကေိုသနျ့ရှငျးခွောကျသှအေ့ောငျထားပါ။ ပှသာအဝတျအစားမြားဝတျဆငျပါ။ ရအေေးဖွငျ့ရခြေိုးခွငျး၊ လအေေးပေးစကျဖွငျ့နထေိုငျခွငျးတို့ဟာ ဝဒေနာသကျသာမှုကို မြားစှာအထောကျအကူပွုပါတယျ။
အပူနဲ့ပတျသကျလို့သတိပွုဖှယျရာမြားကိုဖျေါပွပေးခွငျးသာဖွဈပါတယျ။ အသကျကိုဉာဏျစောငျ့ ဆိုသောစကားကို သတိထားကွပွီး အပူဒဏျပွငျးနသေောကာလတှငျအပူကွောငျ့ ဖွဈတတျသော ရောဂါဝဒေနာမြားမှ ကငျးလှတျနိုငျကွပါစလေို့ မွနျမာနှဈသဈမင်ျဂလာ အကွိုဆုတော ငျးအဖွဈဆု တောငျးမတ်ေတာ ပို့သအပျပါတယျ။
မှတျခကျြ. ကနျြးမာရေးဝနျကွီးဌာနမှ ထုတျပွနျခကျြမြားကို သခြော စှာလလေ့ာသငျ့ပါတယျ။
အပူချိန်မြင့်မားလာချိန်တွေမှာ သတိပြုရမည့် အချက်များ
လူများစွာတို့အတွက်နွေရာသီကာလဆိုတာကျောင်းပိတ်ရက်၊ ရုံးပိတ်ရက်၊ ခရီးသွားရက်၊ အပန်းဖြေရက် ဖြစ်ပါတယ်။
တနည်းပြောရပါက လေအေးပေးစက်များတပ်ဆင်ထားတဲ့ ရုံးခန်း၊ အိမ်ဧည့်ခန်းတွေထဲက ပင်နေပူထဲအထွက်များတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒါကြောင့် နေရောင်ခြည်နဲ့ တိုက်ရိုက်ထီတွေ့မှုများတဲ့ကာလ၊ အအေးဓါတ်သင့်တင့်အောင်မရှိတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင မှာအနေများတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီမှာ ပူပြင်းလွန်းတဲ့ နေရောင်ခြည်နဲ့ ထိတွေ့ရတဲ့ အခါ လူအတော်များများမှာ နေရောင်ခြည်နဲ့ ဆက်စပ်တဲ့ဖျားနာမှုတွေကို ခံစားကြရပါတော့တယ်။
နေပူထဲတွင်အလုပ်လုပ်ကြရသူများ၊ သွားလာနေထိုင်ကြသူများအနေနဲ့ အပူဒဏ်ခံစားရမှု အနည်း အများဟာ သဘာဝရေးရာအခြေအနေ(၄)မျိုးအပေါ်မှာမူတည်နေပါတယ်။
အဲဒါတွေကတော့ (၁) အပူချိန်၊ (၂)ရေငွေ့၊ (၃)အပူရှိန် နဲ့ လေတိုက်နှုန်း တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ အထူးသဖြင့် နှလုံးရောဂါရှိ သူများ၊ water pills ဆောင်ထားရသူများအနေနဲ့ အပူဒဏ်ခံစားရမှုဟာ ပိုမိုဆိုးဝါးတတ်ပါတယ်။
အမှန်တော့ လူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာ ပြင်ပအပူဒဏ်ကိုခုခံကာကွယ်ဖို့ (၃)မျိုးသုံးစား ဆောင်ရွက်ပေးလေ့ ရှိပါတယ်။ ဒါတွေကတော့ အသက်ရှူခြင်း၊ ချွေးထွက်ခြင်း နဲ့ သွေးလည်ပတ်မှုကိုပြောင်းလဲပေးခြင်း တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် ပြင်ပအပူရှိန်မြင့် တက်လာပါက ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သွေးလည်ပတ်မှုတွေ ဟာ မြန်ဆန်လာတတ်ကြပါတယ်။
ယင်းမှတစ်ဆင့် အရေပြားအပူချိန်တွေကိုတိုးမြှင့်လာစေပြီး ခန္ဓာကိုယ်တွင်းမှ ပိုလာတဲ့ အပူတွေကို ပြင်ပသို့စွန့်ထုတ်ပေးစေပါတယ်။ အလုပ်များပင်ပင်ပန်းပန်း လုပ်ကြရတဲ့အခါ ခန္ဓာကိုယ်ရှိကြွက်သားများဟာ သွေးစီးဆင်းမှုပိုမိုလိုအပ်လာပါတယ်။အဲဒီအချိန်မှာ ခန္ဓာမှ လွှတ်ပေးနေတဲ့ အရေပြားရဲ့သွေးစီးဆင်းမှုအတွက်လိုအပ်တဲ့သွေးပမာဏကိုလျော့ကျစေပြီး ခန္ဓာကိုယ်မှအပူများအပြင်ကိုစွန့်ထုတ်စေပါတယ်။
ချွေးထွက်ခြင်းဟာလည်း ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အပူချိန်များကိုကျဆေင်းစေပြီးအအေးဓါတ်ကိုရစေပါတယ်။ ဒါဟာလည်း ပြင်ပလေထုစိုထိုင်းဆတွေဟာ လျော့နည်းနေပြီး ထွက်လာတဲ့ချွေးတွေကို အငွေ့ပျံ စေနှိုင်မှသာဖြစ်နိုင်ပြီး၊ အဲဒီချွေးတွေ အငွေ့ပျံသွားလို့ လျော့နည်းကျသွားတဲ့ ဆားဓါတ်နဲ့ ရေဓါတ်တွေကိုပြန်လည်အစားထိုးဖြည်ကဆည်းပေးနိုင်မှသာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်ဟာ မြင့်မားပါက အပူဒဏ်ဖိစီးခံရမှု(Heat stress)ကို ခံစားကြရပါတယ်။ အပူဒဏ်ဖိစီးခံရတဲ့သူတစ်ဦးဟာ အပူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝေဒနာမျိုးစုံးကိုကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ heat exhaustion, heat stroke, heat cramps, fainting, heat rash စတာတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ အမှန်မှာတော့ လူအများစုဟာ ဒီအပူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝေဒနာတွေကို ကွဲကွဲပြားပြားမသိကြပဲ ရောထွေးနေတတ်ကြပါတယ်။ အမှန်မှာတော့ ခွဲခြားသိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
အပူဆိုင်ရာပြဿနာတွေထဲမှာ အဆိုးဝါးဆုံးဝေဒနာတစ်ခုမဟုတ်သော်ငြားလည်း အဖြစ်အများဆုံး သော ဝေဒနာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဝေဒနာကို အလုပ်သမားတစ်ဦးဟာ ချွေးထွက်လွန်လာချိန်တွင် ရေအလုံအလောက်မသောက်ရပါက၊ ဒါမှာမဟုတ် ထွက်းသွားတဲ့ချွေးများအတွက် ဆားဓါတ် အလုံအလောက်ပြန်လည်မရရှိပါကဖြစ်တတ်သောဝေဒနာဖြစ်ပါတယ်။ များသောအားဖြင့် သက်ဆိုင်ရာ လူနာဟာ အားဖျော့လာခြင်း၊ အသားအရေဖြူဖပ်ဖြူလျော်ဖြစ်လာခြင်း၊ ချွေးများဖြင့် စိုရွှဲလာခြင်း စတာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။
ရောဂါသွင်ပြင်လက္ခဏာများ။ ချွေးထွက်လွန်ခြင်း၊ မောပန်းနွမ်းနယ်၍အားနည်းလာခြင်း၊ ကိုယ်အပူချိန်အနည်းငယ် မြင့်တက်လာခြင်း၊ အသားအရေဖြူဖပ်ဖြူလျော်ဖြစ်လာပြီးသွေးဆုတ်လာခြင်း။
ရှေးဦးသူနာပြု ဆောင်ရွက်သင့်သောအရာများ။ (က)အေးသောနေရာတွင်တားနေပါ။ (ခ)အားကစားသမားများသုံးဆောင်သော အားဖြည့် အချိုရည် တစ်မျိုးမျိုး ကိုသောက်သုံးပါ။ (ဂ)အကယ်၍ အော့အန်ခြင်း၊ အစားအရည်သွေးမရှိသကဲ့သို့ ဖြူဖတ်ဖြူလျော်ဖြစ်လာပါက ဆရာဝန်ဆေးခန်းနဲ့ အမြန်ဆုံးပြသပြီးကုသမှုခံယူပါ။
အပူကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သောဝေဒနာများတွင် အဆိုးဝါးအပြင်းထန်ဆုံးဝေဒနာဖြစ်ပြီး၊ နေပူထဲတွင်အ ချိန်ကြာမြင့်စွာအလုပ်လုပ်နေသောအလုပ်သမားများတွင်အများဆုံးဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိသော်လည်း အဖြစ်များလေ့မရှိပါ။
လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်က ပင်မအပူချိန်တွင်ထိန်းထားနိုင်ရန် သွေးလည်ပတ်မှုမပြုနိုင်တဲ့ အခါမှာ ဖြစ်လေ့ရှိတဲ့ဝေဒနာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအခါမျိုးမှာ လူ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာချွေးမထွက်နိုင်တော့တဲ့ တွက် ခန္ဓာကိုယ်မှာပိုလျှံနေတဲ့အပူတွေကိုမစွန့်ထုတ်နိုင်တဲ့အတွက်ရရှိလာတဲ့ဝေဒနာဖြစ်ပါတယ်။မှန်ကန်တဲ့ကုသမှုကိုအမြန်ဆုံးမရရှိနှိုင်ပါက အသက်သေဆုံးရလေ့ရှိပါတယ်။
ရောဂါလက္ခဏာများစိတ်ဂယောင်ခြောက်ချားဖြစ်ခြင်း၊ သွေးဆုတ်ခြင်း၊ delirium, seizures ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်106ºFထက်ကျော်လွန်နေခြင်း၊ ကိုယ်ပူခြင်း၊ အသားအရခြောက်ခမ်းခြင်း၊ အသားများ နီရဲခြင်း၊ အသားများပြာနှမ်းလာခြင်း၊
အရေးပေါ်သူနာပြုကားကိုခေါ်ဆိုပါ။လူနာအားအေးသောနေရာတစ်ခုသို့ပြောင်းရွှေ့ထားပါ။ အအေးဆွတ်ထားသော ရဝတ်တိုက်ပေးခြင်းအားဖြင့်လူနားအားစိုစွတ်နေပါစေ။ လူနားအား လေအေးစက်၊ ပန်ကာလေဖြင့် အပူချိန်ကျအောင်ဆောင်ရွက်ပေးပါ။
ကြွက်သားများမခံမရပ်နိုင်အောင်နာကျင်မှုကိုခံစားရတဲ့ဝေဒနာဖြစ်ပါတယ်။ ရောဂွဖြစ်ရတဲ့ အကြောင်းရင်းမှာ အလုပ်သမားများဟာ အလွန်မောပန်းလို့ချွေးထွက်လွန်လာသော အခါရေကို အများအပြားသောက်သော်လည်းထွက်သွားတဲ့ချွေးများရဲ့နေရာကို ဆားဓါတ်မဖြည့်ဆည်း ပေးတဲ့အတွက်ဖြစ်ရတဲ့ဝေဒနာဖြစ်ပါတယ်။ အလုပ်လုပ်ရာတွင်အသုံးများသော ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ကြွက်သားများဟာ cramps အများဆုံး ခံစားကြရပါတယ်။
ကြွက်သားများ cramps or spasms ဖြစ်ခြင်း။ အလုပ်လုပ်နေစဉ်အတွင်း (သို့မဟုတ်) အလုပ်လုပ်ပြီးမှဖြစ်ပေါ်တတ်လေ့ရှိပါတယ်။
အားကစားသမားများအသုံးပြုသော အားဖြည့်အချိုရည်တစ်ခုခုကိုသောက်သုံးပါ၊ မသက်သာပါက ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန/ဆေးရုံ/သူနာပြုကားတို့ကိုအကြောင်းကြားပါ။
နေပူထဲတွင်အလုပ်လုပ်လေ့မရှိသူများ နေပူအတွင်းအလုပ်လုပ်မိသောအခါ(သိူ့မဟုတ်) နေပူထဲတွင် ကြီးကြပ်ရေးအလုပ်လုပ်မိသော အခါဖြစ်တတ်သောဝေဒနာဖြစ်ပါတယ်။
အများအားဖြင့် နေပူအတွင်း အချိန်ကြာမြင့်စွာရပ်တန့်နေခြင်းထက် တစ်နေရာမှတစ်နေရာရွေ့ပြောင်း လျှောက်သွားနေခြင်းက များသောအားဖြင့် သွေးဆုတ်ယုတ်မှုဖြစ်ပေါ်စေမှုကို လျော့ကျစေတတ်ပါတယ်။
ခေတ္တခဏမျှ သတိလစ်သွားတတ်ခြင်း၊ ခန္ဓာကိုယ်တွင်သာမာန်အပူချိန်မျှသာရှိနေသော်လည်းချွေးထွက်များနေတတ်ခြင်း။ Heat stroke, heat exhaustation ဝေဒနာလက္ခဏာများမတွေ့ရတတ်ခြင်း၊
အေးသောနေရာတစ်ခုခုတွင် လဲလျောင်းနေပါ။ အချိန်အတန်ကြာသည်အထိလဲလျောင်းနေသော်လည်းသက်သာမှုမရှိပါကဆေးကုသမှုခံယူပေးပါ။
rash ကို Pricky heat ဟုလည်းခေါ်ဝေါ်ကြပါတယ်။ လေထုသည် ပူအိုက်စွတ်စိုနေသောအခါ အလုပ်လုပ်နေသူတစ်ဦးဟာ ချွေးများထွက်လာတဲ့အခါ အလွယ်တကးအငွေ့ မပျံနိုင်တဲ့အတွက် ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်ရတဲ့ဝေဒနာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါ rash ဧရိယာဟာ ကြိးမား ကျယ်ပြန့်လာပါက အလွန်အခံရခက်စေတဲ့ဝေဒနာကိုခံစားကြရပါတယ်။
အေးတဲ့နေရာတစ်ခုမှာနေပြီး အရေပြားကို ခြောက်သွေ့အောင်လုပ်ပေးခြင်းအားဖြင့် Heat rash ဖြစ်ခြင်းကိုကာကွယ်ပေးနိုင်ကြပါတယ်။
အသားအရေကိုသန့်ရှင်းခြောက်သွေ့အောင်ထားပါ။ ပွသာအဝတ်အစားများဝတ်ဆင်ပါ။ ရေအေးဖြင့်ရေချိုးခြင်း၊ လေအေးပေးစက်ဖြင့်နေထိုင်ခြင်းတို့ဟာ ဝေဒနာသက်သာမှုကို များစွာအထောက်အကူပြုပါတယ်။
အပူနဲ့ပတ်သက်လို့သတိပြုဖွယ်ရာများကိုဖေါ်ပြပေးခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။ အသက်ကိုဉာဏ်စောင့် ဆိုသောစကားကို သတိထားကြပြီး အပူဒဏ်ပြင်းနေသောကာလတွင်အပူကြောင့် ဖြစ်တတ်သော ရောဂါဝေဒနာများမှ ကင်းလွတ်နိုင်ကြပါစေလို့ မြန်မာနှစ်သစ်မင်္ဂလာ အကြိုဆုတော င်းအဖြစ်ဆု တောင်းမေတ္တာ ပို့သအပ်ပါတယ်။
မှတ်ချက်. ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်ချက်များကို သေချာ စွာလေ့လာသင့်ပါတယ်။
မတျောတဆမှုတှကွေား အမွဲစှနျ့စားနရေတဲ့ ဆောကျလုပျရေးဝနျထမျးတှရေဲ့အဖွဈ